Mahinda Rajapakse - Wikipedia
I Mahinda Rajapakse, na Percy Mahendra Rajapaksa (amin'ny fiteny singalesa මහින්ද රාජපක්ෂ) (teraka tamin'ny 18 Novambra 1945 tany Weeraketiya, any Sri Lanka), dia filoha ankehitrinin'i Sri Lanka, lany filoha tamin'ny Novambra 2005 ary mbola lany fanindroany tamin'ny Janoary 2010. Ity no lehiben'ny SLFP (Antoko Sri-lankein'ny Fahalalahana). Depiote izy tamin'ny 1970 hatramin'ny 1977 sy tamin'ny 1989, ary minisitra tamin'ny taona 1990 ary praiminisitra, nilaza izy fa eo amin'ny anivo-ankavia ny fisiany amin'ny ara-politika.
Sarin'i Mahinda Rajapaksa.
I Rajapaksa dia teraka tany atsimon'i Sri-Lanka, tanaty fianankavian'ny ôligarsia : ny rainy, D. A. Rajapaksa, dia minisitry ny Fambolena kôlônialin'ny Wijeyananda Dahanayake (1959-1960), ary ny dadatoany, D. M. Rajapaksa, dia mpanolo-tsaim-pirenenan'ny firenen'i Ceylan tamin'ny 1930. I D. M. Rajapaksa dia nitondra lay volontsokola nentin'ny tantsaha mamboly eleozina, eva mbola entin'i zana-dralahiny Mahinda.
Nianatra tao amin'ny Kolejy Richnond, any Galle (120 km-n'ny Kolombo) aloha ny mihakatra an-drenivohitra, nianatra tao amin'ny Nalanda College Colombo (bodhista), sy tao amin'ny Thurstan College. Tao aorian'ny fahafatesan'ny rainy, tamin'ny 1967, lasa kandidan'ny SLFP (Antoko Sri-lankein'ny fahalalahana) izy tao amin'ny fizaram-paritany nahabe anazy tao Beliatta. Telo taona teo aoriana, niditra tany amin'ny Antenimiera izy, ary depiote Sri-lankey tanora indrindra izy (24 taona) ; ny fisiany dia eo anivo-ankavia.
Nanomboka nianatra ny zo ity tamin'ny 1974 tao amin'ny Sri Lanka Law College, mpisolovava izy nianiana tamin'ny Novambra 1977, taona ahaverezany ny sezan'ny depiote, nohon'ny faharesena ara-pifidianana ny antoko SLPF. Niasa mpisolovava izy tamin'izy nanan-tseza tao amin'ny antenimiera, niaro ny zon'olombelona izy, ary nanajanona ny asa mpisolovava izy tamin'izy minisitra. Nandritry ny 25 taona (hatramin'ny 2004), nitondra ny Komite sri-lankein'ny firaisankina amin'i Palestina izy , ary ho an'ny vahaolana tsy maherisetra sy ho an'ny famoronana firenena Palestianianina manam-pahaleovantena izy.
Lany Depioten'i Hambantota izy tamin'ny 1989, ny nampalaza azy dia izy nifarimbona tamin'i Manorani Saravanamuttu mba handrindra ny Handrin'ny reny, nifanohitra tamin'ny « tahotra fotsy » an'ny gropy mpiodina Deshapremi Jathika Vyaparaya (Handrina patriôtika nasionaly).
↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 et 1,6 Biôgrafia ofisialin'ny Archived Jolay 4, 2007 at the Wayback Machine filoha (eo amin'ny sehatra ny governemanta)
((en)) Sehatr'i Mahinda Rajapaksa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahinda_Rajapakse&oldid=1022517"
Dernière modification le 12 Aogositra 2021, à 06:52
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 06:52 ity pejy ity.